National Power News:: प्रेममा परेकै हुन् जान्भी र ईशान ? National Power News:: प्रेममा परेकै हुन् जान्भी र ईशान ?
काठमाडौं – स्वर्गीय बलिउड अभिनेत्री श्रीदेवीकी छोरी जान्भी कपुरले फिल्म ‘धडक’ बाट बलिउडमा इन्ट्री गरिसकेकी छन् । पहिलो फिल्मबाटै उनले सफलताको स्वाद चाखिन् ।
‘धडक’ को सुटिङका क्रममा जान्भी र ईशानबीच बलियो अफस्क्रिन कमेस्ट्री बनेको थियो । फिल्मको सक्सेस पार्टीका क्रममा उनीहरु एक आपसमा निकै घनिष्ठ देखिए । कसैसँग धक नमानिकन उनीहरुले एक(अर्काको अंगालोमा फोटो खिचाएका थिए । त्यसपछि उनीहरु रेस्टुरेन्ट र मुभी डेटमा भेटिए । अहिले त उनीहरु एक(अर्काको घरमै मजाले आउजाउ गर्छन् ।
केही दिनअघि शाहिद कपुरकी पत्नी मिराको ‘बेबी शोअर’ का अवसरमा जान्भी पनि पुगेकी थिइन् । यसैगरी ईशान पनि जान्भीको घरमा पटक(पटक आइसकेका छन् । खबरअनुसार जान्भीका बुवा बोनी कपुरलाई उनीहरुको घनिष्ठतामा आपत्ति छैन । उनको ग्रिन सिग्नलमा नै जान्भी र ईशानको प्रेम अगाडि बढेको चर्चा छ ।
‘धडक’ को सुटिङका क्रममा जान्भी र ईशानबीच बलियो अफस्क्रिन कमेस्ट्री बनेको थियो । फिल्मको सक्सेस पार्टीका क्रममा उनीहरु एक आपसमा निकै घनिष्ठ देखिए । कसैसँग धक नमानिकन उनीहरुले एक(अर्काको अंगालोमा फोटो खिचाएका थिए । त्यसपछि उनीहरु रेस्टुरेन्ट र मुभी डेटमा भेटिए । अहिले त उनीहरु एक-अर्काको घरमै मजाले आउजाउ गर्छन् ।